တိုက်ခန်း - အသင့်နေထိုင်နိုင်သောကွန်ဒို ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းငှါးမည် Price in Myanmar | Myanmarkt Marketplace | Myanmarkt
တိုက်ခန်း classified: အသင့်နေထိုင်နိုင်သောကွန်ဒို ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းငှါးမည်
#ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ_အသင့်နေထိုင်နိုင်သောကွန်ဒို ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းငှါးမည်။ +++++++++++++++++++++++++++++++++++ 🌀 ရန်ကင်း၊ ကျောက်ကုန်းကွန်ဒို 🌀 အကျယ်အဝန်း(1250-Sqft), 3-floor. 🌀 1-Master bedroom, 2-Bedroom. 🌀 Air con, Car parking, ပါကေးခင်း။ 💯 ပြင်ဆင်ပြီးသားကွန်ဒိုလေးအား ဈေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့် ငှားမည်။ 💵 ဈေးနှုန်း_၅သိန်း 📲 09-752 75 75 47 📲 09-7789 69 226 📲 09-250 998 522 📲 09-340 185 131